China GD-PF-001: ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | GUODA
High Quality & Reutation: Jighi Quality Control na-ekwe nkwa na àgwà nke anyị na, na nke anyị na-emeri ndị toro eto n'ụwa nile.
Frame size: 26 / 27.5 / 29 “
Isi ọkpọ: 50 * 44 * 120mm
Oche oche: 31.8mm
OEM: Logo, Ihe osise, nha
Akara ahia: Ahịa
Ihe ngwugwu njem: Mbukota Carton
Nke gara aga: GD-CFB-002 (RED): ALLOY FRAME 20 ″, Folding Bike, FOLDEN igwe kwụ otu ebe,
Igwe ịnyịnya GUODA bụ ihe ama ama maka ụdị ejiji ha na ogo klaasị ha. E wezụga nke ahụ, atụmatụ eji arụ ọrụ nke ịnyịnya ígwè GUODA ga-eme ka ọ inụ dị na ojiji ka ọ ka mma, na-eme ka ahụmịhe ịnya ịnyịnya gị dị mma ma nwee nchebe.
Zụta ezigbo ịnyịnya ígwè iji malite ịgba ịnyịnya ígwè gị. Nchọpụta sayensi gosiri na ịgba ígwè bara uru maka ahụ mmadụ. Yabụ, ịzụta igwe kwụ otu ebe pụtara n'ezie ịhọrọ ndụ ndụ siri ike. Tụkwasị na nke a, ịgba ịnyịnya ígwè abụghị naanị na-enyere gị aka ịgbanahụ mkpọchi okporo ụzọ ma bie ndụ akwụkwọ ndụ carbon dị ala, kamakwa meziwanye usoro njem mpaghara ma bụrụ enyi na gburugburu ebe obibi anyị.
Nye ngwaahia Service na ndị ọzọ magburu onwe ọrụ: Ewezuga site na-emeghe ase, anyị na-enye ndị na-echebara na akwalite ọdịmma ndị mmadụ Sample Service na Mgbe-sales Service izute ndị ahịa anyị afọ ojuju.
Lowrider igwe kwụ otu ebe